Mark Zuckerberg ku tiirsan Seeraar si ay u caawiyaan eheen Facebook
Seeraar ay beeluhu ku technology The caawin kartaa wanaajinta Facebook mustaqbalka, Mark Zuckerberg ayaa sheegay in.
Iyada oo qayb ka go'an tahay inuu kaa caawiyo xaliyo goobta ka badan 2018, ay aasaasaha ayaa sheegay in uu u ekaan lahaa galay isticmaalka technology cusub si ay u joojiso xad sidaas dhexe.
Mid ka mid ah farsamooyinka kuwa waxaa Seeraar, ayuu yidhi.
“Dad badan oo naga mid ah fuuleen technology, maxaa yeelay, waxaynu rumaysan nahay waxa ay noqon karaan xoog daadajinaya in dhigeysa awood dheeraad ah in gacmaha dadka. (The afar erey koowaad ee howlgalka Facebook ayaa had iyo jeer ahaa “dadka siiyo awoodda”.) Back ee 1990 iyo 2000, dadka intooda badan technology rumeysan noqon lahaa ciidan daadajinaya,” wuxuu warqadihii ku qoray post dheer.
“laakiin maanta…dad badan ayaa haatan aaminsan yihiin technology kaliya centralizes xoog halkii ay u decentralizes.”
“Waxaa jira muhiim counter-rogga in this - sida sirta iyo cryptocurrency - in xoog ka qaado nidaamka dhexe iyo dib u dhigay gacmaha dadka galay. Laakiin waxay khatar ku ah inay noqoto mid adag in la xakameeyo iman. Waxaan ahay xiiso qoto dheer si ay u tagaan oo bartaan togan iyo taban ee teknoolajiyada kuwaas, iyo sida ugu wanaagsan ee loo isticmaalo adeegyadayada,” ayuu qoray.
Bank of England inuusan qorsheyneyn inuu bilowdo cryptocurrency
The Bank of England ayaa hoos qorshe ay ku bilaabi lahaayeen lacagta digital gaar ah iyada oo welwel ku saabsan saamaynta ay ku leedahay nidaamka maaliyadeed.
bangiga dhexe ee U.K. ayaa sheegay FTAdviser in uu leeyahay “ma qorshayaasha hadda” inay bilaabi lahaayeen cryptocurrency u gaar ah, laakiin sii wadi doonaa in ay baaritaan mawduuca.
Boe ayaa tilmaamay waxaa hoos qorshe u sarreeyey walaac in dadweynaha joojin laga yaabaa in la isticmaalayo xisaabaha bangiga ganacsiga iyo guurto on in nidaamka lacag bixinta digital Boe ee dhinca dhaqdhaqaaqa iyo iibsashada alaabta. A mass in cryptocurrency Boe ku dhaqaaqo ay sababi karaan bangiyada ganacsiga qulqulaya oo lacag caddaan ah si ay wax amaahisaan, keenaya “qas” dhaqaalaha, waxa uu sheegay in.
Baadan ETF Seeraar soo jeediyay in SEC ah
xoreeyo. maamulayaasha fund ayaa qorsheyneysa in la dhiso iyo lacag "baadan" "-bedelka" in kici lahaa – ama dhici – laba jeer sida ugu dhakhsaha badan qiimaha Seeraar maalin siiyey.
Direxion Hantida Management LLC ayaa qorshaynaysa in ay qor waxyaabaha sida on Intercontinental Exchange Inc ee sarrifka NYSE Arca haddii laga xoreeyo. securities nidaamiyo siiyo booska, sida ay fayl ah by sarrifka Isbuucaan.
Ilaa hadda laga xoreeyo dalka ah. Guddiga Securities and Exchange ayaa ka gaabsaday ama saaray qaban oo dhan soo jeedinta.
Overstock helo US $ 100M ka George Soros in lagu maalgeliyo mashaariic blockchain oo dheeraad ah
Overstock.com uun helay waslad a culus isbedelka ka mid ka mid ah oo magac weyn ku Maaliyadda, iyo CEO Patrick Byrne ayaa sheegay in inta badan waxaa ka mid ah maal doonaa shaqada ee shirkadda blockchain.
Shirkadda shaacin ee Guddiga Securities and Exchange a (SEC) fayl todobaadkan in cidda amar uu dhaqmaa ay xaq ay u soo iibsadaan $100 milyan saamiyada. Inkasta oo fayl ma garto Maal this, Byrne sheegay CoinDesk waxay ahayd Fund Quantum ah, maamula billionaire George Soros.
Post Previous:The dhacdooyinka ugu muhiimsan ee 2017 ee Community Crypto ah
Post Next:Sidee Market ICO ka bedeli doono 2018?